Proverb 26 Adin' akoholahy vorombato ; ny mahery disadisaka ary ny resy torotoro. [Houlder 1895 #359]
Proverb 43 Afa-baraka toy ny vomanga an-tanàna , fa ny akoho no avy mihehy . [Cousins 1871, Veyrières 1913, Rinara 1974]
Afa-baraka toy ny vomanga an-tanàna , ka ny akoho no avy mihehy . [Houlder 1895]
Proverb 110 Akoho ambony sompitra ka mihehy ny efa vory. [Rinara 1974]
Proverb 114 Akohokely lasam- papango : misidina ambony vao tra-pahoriana . [Rinara 1974]
Akohokely lasam- papango : nisidina ambony vao tra-pahoriana . [Rajemisa 1985 #45]
Proverb 116 Akohokely misotro rano : ny kely azo enti-miandrandra . [Nicol 1935 #303]
Akohokely nisotro rano : ny kely azo enti-miandrandra . [Veyrières 1913 #832, Cousins 1871 #56]
Proverb 117 Akohokely notsipazam-potsimbary : sady taitra no faly. [Cousins 1871 #55, Nicol 1935 #123]
Proverb 118 Akoholahy ambony tanantanana : mifoha maraina tsy mba mihehy. [Cousins 1871 #58, Veyrières 1913]
Proverb 119 Akoholahy an-tanàna , ka samy manenjika ny resiny. [Rinara 1974]
Proverb 120 Akoholahy fahavaratra , ka rebarebany ihany. [Veyrières 1913 #2988, Cousins 1871, Rinara 1974]
Proverb 121 Akoholahy jamba : ampiadiana tsy miady , avela manaingoka ny namany . [Rinara 1974]
Akoholahy jamba : ampiadiana , tsy miady ; tonga ao an-trano , manaingoka ny namany . [Veyrières 1913 #3448]
Akoholahy jamba : ampiadina , tsy miady ; tonga ao an-trano , manaingoka ny namany . [Cousins 1871 #60]
Proverb 122 Akoholahy kelin' Antananarivo : mivoaka maraina , fa tsy mitsindroka . [Veyrières 1913 #2989, Cousins 1871 #61]
Proverb 123 Akoholahy manakohokoho akohovavy : tsy hanin-kahavoky , fa voninahitra ifanomezana . [Rinara 1974]
Akoholahy manakohokoho vavy : tsy hanin-kahavoky , fa volan-kifanajana . [Houlder 1895 #1337, Cousins 1871 #62]
Akoholahy mikohokoho vavy ; tsy hanin-kahavoky fa voninahitra ifanomezana . [Rajemisa 1985 #695]
Proverb 124 Akoholahy maneno alina : lozain' ny vavany . [Veyrières 1913 #4715]
Proverb 127 Akoholahy maty raibe : samy manano izay tiany . [Samson 1965 #A28]
Proverb 128 Akoholahy miady am--pasika , ka samy miaro ny masony tsy ho ditsika . [Houlder 1895 #1171]
Akoholahy miady am--pasika : samy manala ny ditsika amin' ny masony . [Veyrières 1913 #3226]
Akoholahy miady am--pasika : samy miaro ny masony tsy ho ditsika . [Veyrières 1913 #3227, Rinara 1974]
Akoholahy miady am--pasika : samy miaro ny masony tsy ho ditsoka . [Veyrières 1913 #3227, Cousins 1871 #65, Rinara 1974]
Akoholahy miale am-pase ka sambe miaro ty masoñe tsy ho lintsike . [Poirot & Santio: Vezo]
Toy ny akoholahy miady am--pasika , ka samy miaro ny masony tsy ho ditsoka . [Rinara 1974 #4250]
Toy ny akoholahy miady am--pasika : samy manala ny ditsika amy ny masony . [Cousins 1871 #3173]
Proverb 129 Akoholahy mitelin-koto : raha mahay mitelina dia tohan' aina , raha tsy mahay dia singotry ny lela . [Veyrières 1913 #3537]
Proverb 130 Akoholahin' an-tanantanana : mivoaka maraina fa tsy mitsindroka . [Rinara 1974]
Proverb 131 Akoholahin-tsampy : raha hisy vahiny , dia maneno an-tokonana . [Veyrières 1913 #6199]
Proverb 132 Akoholahy sy masoandro , ka mifamotoan-tsamy lavitra . [Houlder 1895 #1485, Rinara 1974]
Masoandro sy akoholahy : mifamotoan-tsamy lavitra . [Rinara 1974 #2155]
Proverb 133 Akoholahy tsy maneno anio , rahampitso mbola andro . [Veyrières 1913 #3449]
Proverb 134 Akoholahy tsy maneno toy izay lasan-kary . [Veyrières 1913 #744, Houlder 1895]
Akoho tsy naneno ohatra izay lanin' ny kary . [Rajemisa 1985 #45]
Akoho tsy naneno ohatr' izay lasan' ny kary . [Rajemisa 1985 #45]
Akoho tsy naneno toy izay, afoizo fa lasan' ny kary . [Rinara 1974]
Raha akoholahy tsy naneno toy izay, afoizo fa lasan' ny kary . [Rinara 1974 #3545]
Proverb 135 Akoho mamàna : miangoty amin-tompony . [Samson 1965 #A25]
Proverb 136 Akoho mandeha amin' ny sahafa : solafaka . [Veyrières 1913 #6267]
Proverb 137 Akoho mangery an-tsihy : samy manano izay ho efany. [Samson 1965 #A23]
Proverb 138 Akoho manitsa-draty , ka samy hindrakindrafana ihany. [Cousins 1871]
Akoho manitsa-draty , ka samy indrakindrafana ihany. [Veyrières 1913 #5682, Rinara 1974]
Proverb 139 Akoho mikotri-borombazaha : kohokohoina , fisa-bava ; havela, toa zanaky ny tena. [Cousins 1871 #48]
Proverb 140 Akoho mikotri-borona : kobokohoina , tsy any ny tena ; avela ihany, zaza nanasatra . [Cousins 1871]
Akoho mikotri- -borona : kohokohoina , toy an' ny tena ; avela ihany, zaza nanasatra . [Veyrières 1913 #955]
Akoho mikotri- -borona : kohokohoina , tsy an' ny tena , avela kosa zaza nanasatra . [Rinara 1974]
Proverb 141 Akoho mikotri- -borona : miongo-bolo amin' izay tsy ho namana . [Rinara 1974]
Akoho mikotrika atodim-borona : miongo-bolo amy ny tsy ho any ny tena . [Cousins 1871 #46]
Akoho mikotrika atodim-borona : miongo-bolo amin’ ny tsy ho an’ ny tena . [Nicol 1935 #300]
Akoho nikotrika atodim-borona , ka miongo-bolo amin' ny tsy ho an' ny tena . [Houlder 1895 #1683]
Proverb 143 Akoho minon-drano : lanitra andraina. [Samson 1965 #A26]
Akoho minon-drano : ny be azo iandranandranana , ny kely azo iandranandranana . [Veyrières 1913 #833]
Akoho minon-drano : ny lehibe miandra ny lanitra , ny kely miandra ny lanitra . [Veyrières 1913 #834]
Proverb 144 Akoho misotro rano : ny eto an-tany jerena , ary ny any an--danitra andrandraina koa. [Nicol 1935 #301, Cousins 1871]
Akoho misotro rano : ny eto an-tany jerena , ny any an--danitra koa andrandraina . [Veyrières 1913 #6200]
Akoho misotro rano : ny eto an-tany jerena , ny lanitra andrandraina . [Rinara 1974]
Toy ny akohokely misotro rano , ka izay azo andrandraina ny lanitra . [Rinara 1974 #4248]
Proverb 145 Akoho naratr’ afo : harivariva laha miherina . [Samson 1965 #A24]
Proverb 147 Akoho nipahin-drano : tsy fanin-tompoko anahy. [Samson 1965 #A21]
Proverb 148 Akoho nisasan-trongotra : tsy ary fanin-tompoko anahy. [Samson 1965 #A20]
Proverb 149 Akohon-kamboty hitsahin’ ny omby mifahy : samy be amy ny azy. [Cousins 1871 #57]
Akohon- kamboty hitsahin' ny omby mifahy : samy be amin' ny azy. [Veyrières 1913 #1019]
Akohon- kamboty hitsahin' omby mifahy , ka samy be amin' ny azy. [Houlder 1895 #1909]
Akohon- kamboty nohitsahin' omby mifahy , ka samy be amin' ny azy. [Rinara 1974]
Proverb 150 Akoho tia hady ; ka manati-babo ho an' ny kary . [Houlder 1895 #876, Veyrières 1913 #6268, Rinara 1974]
Proverb 152 Akoho tsy maneno hoatr’ izay : lanim-posa . [Samson 1965 #A30]
Proverb 153 Akoho vahiny mora lanim-posa . [Samson 1965 #A29]
Proverb 154 Akoho valo namidy voamena : teny miera mahatsara raha. [Samson 1965 #A27]
Proverb 155 Akohovavy maneno, ka lazain' ny avoaky ny vavany . [Houlder 1895 #834]
Akohovavy maneno , ka lozain' ny vavany . [Veyrières 1913]
Akohovavy maneno , lozain' ny navoaky ny vavany . [Veyrières 1913 #1750]
Lozain' ny feony ohatra ny akohovavy maneno . [Rinara 1974]
Lozain' ny vavany ohatra ny akohovavy maneno . [Rinara 1974]
Proverb 156 Akohovavy naneno : lozain’ ny navoaky ny vavany . [Cousins 1871 #68]
Proverb 157 Akoho voatsitoto alo : maladia kiso. [Samson 1965 #A19]
Proverb 343 Amboninjato niongana ve no mitsara adin' akoho , sa governora reraka no mikiraro fatambary ? [Veyrières 1913 #2482]
Proverb 635 Aoka ny akobon-jaza , fa ny voron-dasiray atao . [Cousins 1871 #280]
Aoka ny akohon- jaza , fa ny voron-dasiray atao . [Veyrières 1913 #2276, Rinara 1974 #329]
Proverb 725 Ataovy sotro ranon’ akoho : kely azo, andrandraina ; be azo, andrandraina . [Houlder 1895 #573, Cousins 1871 #310]
Sotro ranon' akoho : kely azo andrandraina , be azo andrandraina . [Rinara 1974 #3960]
Sotroranon' akoho , kely azo iandrandrana , be azo iandrandrana . [Veyrières 1913 #52]
Proverb 728 Ataovy toy ny lamban’ akoho ny fanambadiana : faty no hisarahana . [Cousins 1871 #312]
Ataovy toy ny lamban' akoho ny fanambadiana : faty no isarahana . [Veyrières 1913 #1359]
Ataovy toy ny lamban' akoho ny fanambadiana , ka faty no isarahana . [Houlder 1895 #1817, Rinara 1974 #336]
Proverb 750 Atodin’ akoho : teraka iniany, manditra iniany. [Samson 1965 #A112]
Proverb 782 Aza akoholahy lava fantsy nefa tsy haneno. [Rinara 1974 #364]
Proverb 783 Aza akoholahy manompo, ka na mahaloa-peo aza mikoraraika . [Rinara 1974 #365]
Proverb 784 Aza akoholahy manompo ka tafadify vao maneno misesisesy . [Rinara 1974 #366]
Proverb 796 Aza atao akohon’ Ibafo : mivoaka , kohokohoina ; mandroso , kapohina . [Veyrières 1913 #2063, Cousins 1871 #335]
Aza atao akohon' Ibafo : mivoaka kohokohoina , nony miditra kapohina . [Rinara 1974 #373]
Proverb 802 Aza atao antsy anomindana akoho : maty tankinan’ ny ra. [Veyrières 1913 #3834, Cousins 1871 #337, Rinara 1974]
Proverb 804 Aza atao famaky manan-tsiny amin’ izay kiakiak’ akoho . [Houlder 1895 #156, Cousins 1871 #340]
Proverb 891 Aza indraosina ny mievoka akoho . [Rinara 1974 #453, Houlder 1895]
Aza indroasina ny mievoka akoho . [Veyrières 1913 #5481, Cousins 1871 #388]
Tsy indraoziko ny evok' akoho . [Veyrières 1913 #5482]
Proverb 940 Aza manamavo tena ohatra ny akoho mikotrika ambany farafara . [Rinara 1974 #484]
Aza manamavo tena toy ny akoho mikotrika ambany farafara . [Veyrières 1913 #2992, Cousins 1871 #409]
Proverb 954 Aza manao akohovavy maneno. [Houlder 1895 #833]
Proverb 996 Aza manao fanarainan’ akoho : mifoha maraina , ka eo atsimom-patana ihany. [Veyrières 1913 #3899, Cousins 1871]
Proverb 1144 Aza manao tahaky ny akohokely tomany homana . [Veyrières 1913 #4664]
Proverb 1188 Aza manao tsy ho tratry ny aloka, fandrao tratry ny alok’ akoho . [Cousins 1871 #531]
Proverb 1213 Aza manao volombodin' akoholahy , ka ny any aoriana indray no malaza . [Rinara 1974 #638]
Proverb 1249 Aza mandidy alohan' Andriamanitra . [Rinara 1974 #659]
Aza mandidy alohan' Andriamanitra toy ny mpanotrika akoho . [Houlder 1895 #30]
Mandidy alohan' Andriamanitra hoatry ny mpanotrika akoho : mbola tsy hita na ho foy na tsia, ka " kohokoholahy , kohokohovavy " . [Veyrières 1913 #36]
Mandidy alohan' Andriamanitra sahala amin' ny mpanotrika akoho . [Rinara 1974 #2066]
Mandidy alohan’ Andriamanitra , toy ny mpanotrika akoho . [Cousins 1871 #1586]
Proverb 1270 Aza manely ny efa vory toy ny akoholahy ambony sompitra . [Rinara 1974 #673]
Aza manely vory hoatry ny akoholahy ambony sompitra . [Veyrières 1913 #2351]
Aza manely vory, ohatra ny akoholahy ambony sompitra . [Cousins 1871, Nicol 1935]
Manely vory ohatra ny akoholahy ambony sompitra . [Rajemisa 1985]
Proverb 1300 Aza manombika akoho . [Veyrières 1913 #2281]
Proverb 1342 Aza miady vintana amin' ny akoho fa raha ho any an-tsena izy lanjaina . [Rinara 1974 #724]
Proverb 1350 Aza mianjonanjona toy ny akoho mihinam-biby . [Houlder 1895 #836]
Mianjonanjona toy ny akoho nihinam-bitsika . [Rinara 1974]
Mianjonanjona toy ny akoho nitelim-biby . [Rinara 1974]
Proverb 1360 Aza mietaketaka toy ny akoho kely vidin-drindra . [Houlder 1895 #837]
Aza mietaketaka toy ny akoholahy vidin-drindra . [Rinara 1974 #736]
Aza mietaketaka , toy ny akoho vidin-ketsa . [Cousins 1871 #654]
Mietaketaka ohatra ny akohokely vidin-drindra . [Rinara 1974]
Proverb 1374 Aza mihebiheby maso hoatry ny hitsikitsika hangalatra akoho . [Veyrières 1913 #4283]
Proverb 1431 Aza mitabataba tonga rafozana : akoho iray no hovonoina ka telo lahy no asaina mindram-pamaky . [Rinara 1974]
Aza mitabataba tonga rafozana : akoho iray no vonoina , ka fito lahy no mitsangana. [Veyrières 1913 #1439, Cousins 1871 #645]
Aza mitabataba tonga rafozana : atodi-akoho no laoka , ka antsy solanga no zahana. [Rinara 1974 #783]
Aza mitabataba tonga rafozana : atodiakoho no laoka , ka famaky no tadiavina . [Veyrières 1913 #1440, Cousins 1871 #644]
Mitabataba tonga rafozana , akoho iray no vonoina , ka dimy no mamono . [Rajemisa 1985]
Malagasy interpretation Mihetsiketsika be, nefa tsy hita izay vita, lasan-ko vavany . [Rajemisa 1985]
Proverb 1456 Aza mitomany homana toa akohokely . [Rinara 1974]
Aza mitomany homana , toy ny akohokely . [Veyrières 1913 #4670, Cousins 1871 #665]
Tsy mety raha tomany homana toa akohokely . [Rinara 1974 #4681, Cousins 1871 #3491]
Proverb 1536 Aza tohintohinina fa akoho vorona nisolo ny tena (tamin' ny fampinomana ). [Rinara 1974 #816]
Proverb 1539 Aza tomany homana , toy ny akohokely . [Houlder 1895 #579]
Proverb 1557 Azo amin' ny haingony , hoy ny kary tamin' ny akoholahy . [Rinara 1974]
Proverb 1769 Dedaka tonga rafozana : akoho no hovonoina ka telo lahy no asaina mitsangana. [Rinara 1974 #974]
Proverb 1770 Dedaka tonga rafozana : ka famaky no indramina ary sikina no henjanina , nefa akoho no ho laoka . [Rinara 1974]
Proverb 1771 Dedaka tonga rafozana , ka trano bongo ka asiam-pandri-baratra ; akoho ka nindramam-pamaky ; vola venty ka ampanjanahina ; eranambatry ka atao telo fonosana . [Houlder 1895]
Dedaka tonga rafozana : trano bongo ka asiam-pandri-baratra ; akoho ka nindramam-pamaky ; vola venty ka ampanjanahina ; eranambatry ka atao telo fonosana . [Veyrières 1913 #1442]
Proverb 1845 Drakidraky be tsy mamàna : manome safoitra ny akoho . [Samson 1965 #D15]
Proverb 1898 Eranambatry tsy ampy : vozon' akoho no manefa . [Veyrières 1913 #3641, Rinara 1974 #1043, Cousins 1871 #876]
Proverb 1935 Faly sahirana ohatra ny akohokely tsipazam-potsimbary . [Rajemisa 1985 #45]
Proverb 2017 Fantsin' akoholahy : maranitra ihany, fa ambany. [Veyrières 1913 #5599, Cousins 1871]
Proverb 2028 Fararanon' akoho . [Veyrières 1913 #6738]
Proverb 2120 Fisoko very akoholahy : sady very enjinenjina no diso manakohokoho . [Rinara 1974 #80]
Proverb 2166 Fosa lahy nahazo akoho vanga : variana mizaha ny volony ka tsisy hinanana ny isiny. [Samson 1965 #F42]
Proverb 2167 Fosa lava ohy tsy amonoana akoho mamàna. [Samson 1965 #F41]
Proverb 2254 Halatra akoho mirahavavy : an-kibo no mieritreritra . [Rinara 1974 #1252]
Proverb 2425 Hividy ondry hanahirana, nefa ny akoho mody ho azy. [Rinara 1974 #1352, Cousins 1871 #1081]
Proverb 2431 Hoatry ny akohokely misaraka aman-dreniny . [Veyrières 1913]
Proverb 2455 Hoy ny akoho mikotrika : Nokobaniny tany am--poto- -tsofiny lahy ny atodiko; nefa ny mikiakiaka mbola ho zaza, ary ny mikobana efa lamokany . [Houlder 1895 #2304]
Proverb 2543 Iloka itsy akoho kely. [Veyrières 1913 #1508]
Proverb 2558 Indrindra hatao kary ihany, ka dia hangalatra akoho . [Houlder 1895 #1063]
Proverb 2574 Intelo maty hoatry ny vay notsinaingok' akoho : ny vay manonitra , ny akoho matin -toraka , ary ny sinibe vaky nitsipihan' ny vato . [Veyrières 1913 #2601]
Intelo maty hoatry ny vay voatsaingok' akoho : ny vay manonitra , ny akoho maty voatoraka , ary ny sinibe vaky nitsipihan' ny vato . [Veyrières 1913 #2601]
Intelo maty ohatra ny vay voatsaingok' akoho : ny vay manonitra , ny akoho maty voatoraka , ny sinibe vaky nitsipihan' ny vato . [Cousins 1871, Rinara 1974]
Proverb 2626 Izaho tsy mahalala akoho bevohoka , fa rehefa mikakaka izy saronako . [Rajemisa 1985]
Izaho tsy mahita izay akoho bevohoka , fa izay mikakakaka, saronako . [Rinara 1974 #104]
Izaho tsy mahita izay akoho bevohoka , fa raha mikakaka saronako . [Veyrières 1913 #6227, Cousins 1871 #1168]
Proverb 2948 Kotrika akohon' Imasolahy : telo mbamin' ny reniny. [Rinara 1974]
Kotrik’ akohony Masolahy : telo mbamy ny reniny. [Cousins 1871 #1285]
Proverb 3002 Lambam-borona , ka faty no isarahana . [Veyrières 1913 #1376]
Lamban’ akoho : faty no isarahana . [Nicol 1935 #130, Cousins 1871]
Lamban' akoho , ka faty no isarahana . [Veyrières 1913 #5272, Rinara 1974 #1702, Rajemisa 1985]
Proverb 3058 Lany an-tetiny toy ny rano an-kitsaka akoho . [Rinara 1974 #116]
Proverb 3063 Lany hatoka hoatry ny akoholahy matin' ady . [Veyrières 1913 #3472]
Proverb 3228 Madiodio foana toa nifin' akobo . [Veyrières 1913 #2509]
Madiodio foana toa nifin' akoho . [Houlder 1895 #1471, Rinara 1974 #1823]
Proverb 3270 Mahantra indrindra aho, hoy ilay rombina : homan-tsosoa , raraka ivy ; homa-maina , latsaka hota ; homam-bary , misasaka amin' ny akoho ; misotro rano , very sasaka . [Veyrières 1913 #2609]
Proverb 3296 Mahery an-dranony karaha tain’ akoho . [Samson 1965 #M8]
Proverb 3315 Mahita ny akohokelinay matavy , ka andeha hilalao ry zavavy. [Veyrières 1913 #919, Cousins 1871 #1428]
Mahita ny akohokelinay matavy , ka "andeha hilalao ry zazavavy ". [Rinara 1974 #1888]
Proverb 3359 Malahelo misakaiza amim--Bazimba : ny akoho tsy misy, fa amy ny menaka no miala nenina. [Cousins 1871 #1451]
Malahelo misakaiza amim--Bazimba : ny akoho tsy misy, fa amin' ny menaka no miala nenina . [Veyrières 1913 #81, Rinara 1974]
Proverb 3379 Malaza ho raiben-kary fa tsy mahazaka reniakoho iray! [Rinara 1974 #1932]
Malaza ho raiben-kary , ka tsy mahazaka reny akoho iray. [Cousins 1871 #1457]
Proverb 3380 Malaza ho rain’ akoholahy , ka mitsindroka am-body laona . [Cousins 1871 #1458]
Malaza ho rain' akoholahy ka no mitsindroka am-bodi-laona ! [Rinara 1974 #1933]
Proverb 3403 Mamatotra akoho an-kady , ka manasiaka ny kary . [Cousins 1871 #1472, Nicol 1935 #267]
Proverb 3448 Mampihatsatse manahake ty vozoñ' akoho : hohane , taola, henga , mbo hena avao. [Poirot & Santio: Vezo]
Proverb 3451 Mampisalasala ohatra ny mitsako vozon' akoho : hatelina toa taolana , haloa toa nofony. [Rinara 1974]
Proverb 3464 Manahy elatra ny akoholahy fa lasa ny kary . [Rinara 1974 #1967, Cousins 1871 #1490]
Proverb 3502 Manan-jara mavoin-tena toy ny akohokely lasam-borona : very vao misidina ambony. [Veyrières 1913 #2613]
Proverb 3530 Manao akohobe milefa papango . [Veyrières 1913 #1771]
Proverb 3536 Manao andriambavin' akoho : tompoina , mihohy . [Veyrières 1913 #474]
Proverb 3611 Manao tsy ho tratry ny aloka , kanjo tratry ny alok' akoho . [Houlder 1895 #974]
Nanao tsy ho tratry ny aloka , kanjo tratry ny alok' akoho . [Rajemisa 1985 #56, Rinara 1974 #2743, Cousins 1871 #2079, Nicol 1935 #373]
Proverb 3631 Manarain-tsy lasan-davitra ohatra ny akoho . [Rinara 1974]
Manarain-tsy lasan-davitra , toy ny akoho . [Cousins 1871 #1563]
Marain-tsy lasan-davitra ohatra ny akoho . [Houlder 1895]
Proverb 3640 Manary dia ny fisaorana , ka manakotrika akoho mbola manatody . [Cousins 1871 #1568, Veyrières 1913]
Manary dia ny fisaorana ka mitady fanakotrehana akoho . [Rinara 1974]
Manary dia ny fisaorana ka mitady fanaronana akoho . [Veyrières 1913, Rinara 1974]
Manary dia ny fisaorana , ka mitady fanaronan’ akoho . [Cousins 1871 #1569]
Matahotra ny hisaorana hianao ka mitady ny fanakotrehan' atody . [Veyrières 1913]
Matahotra ny hisaorana hianao ka mitady ny fanotrehan' atody . [Houlder 1895 #1829]
Matahotra ny hisaorana , ka sady mitady fanakotrehana akoho no indroa mandrotsa-bilon' omby ao am-pahitra . [Rinara 1974 #2164]
Proverb 3688 Mandidy forin' akoho . [Veyrières 1913 #2302]
Proverb 3796 Maniry nifin' akoho tsy haniry. [Rajemisa 1985]
Proverb 3823 Manombika akoho ka mahafohifohy fisainana . [Rinara 1974 #2125]
Proverb 3868 Mariry , toa nifin’ akoho . [Veyrières 1913 #2525, Cousins 1871 #1634]
Proverb 3869 Mariry toa nifin' akoho fa marary fitsaingoka . [Rinara 1974 #2137]
Proverb 3898 Masiake an-tsañoñ'olo ka akoho mamana. [Poirot & Santio: Vezo]
Proverb 3911 Mason' akoho ditsika : ny elanelana mpanala ditsika . [Veyrières 1913]
Proverb 3968 Maty tsy antonony ohatra ny reniakoho nosingora-mahazaka . [Rinara 1974]
Maty tsy antonony , toy ny reny akoho nosongira-mahazaka . [Cousins 1871 #1668]
Proverb 4008 Mba mipiapiaka ihany ny akoholahy , fa raha tratry ny rano mafana miraraka ompana. [Rinara 1974 #2220, Cousins 1871]
Proverb 4011 Mby an-joron' akoho . [Veyrières 1913 #6575]
Proverb 4013 Mena ambanin' ny mena . [Veyrières 1913 #649]
Mena ambanin' ny mena ohatra ny tretrak' akoholahy . [Rajemisa 1985]
Toy ny tretrak' akoholahy : mena , fa ambanin' ny mena . [Veyrières 1913 #688, Cousins 1871 #3243]
Toy ny tretrok' akoholahy , ka mena ambanin' ny mena . [Rinara 1974 #4346]
Proverb 4204 Mikaikaika akaikin-dreny toa akohokely . [Rinara 1974 #4171]
Tomany akaikin-dreny toa akohokely . [Rinara 1974 #4171]
Proverb 4278 Mipenimpenina ohatra ny akoho hanatody . [Rinara 1974]
Proverb 4302 Misakaiza amim--Bazimba malahelo; ka ny akoholahy lany, ny fitahiana tsy misy. [Houlder 1895]
Misakaiza amim--Bazimba malahelo : ny fitahiana tsy misy, fa ny akoholahy foana no lany . [Rinara 1974]
Misakaiza amim--Bazimba malahelo : ny fitahiana tsy misy, fa ny akoholahy foana no tapa-doha . [Rinara 1974]
Proverb 4406 Mitoko miefa-madinika toy ny rano an-kitsak' akoho . [Veyrières 1913 #3710]
Ny fanompoana hoatry ny rano an-kitsak' akoho : mitelo miefa-madinika . [Veyrières 1913 #385]
Ny fanompoana ohatra ny ranoan-kitsak’ akoho : mitelo miefa-madinika . [Cousins 1871]
Ny fanompoana tahaka ny rano an-kitsaka akoho , ka mitelo miefa-madinika . [Rinara 1974 #190]
Proverb 4443 Mitoto vary antoandro : manala sahato ny akoho . [Veyrières 1913 #3711, Cousins 1871 #1889]
Proverb 4444 Mitoto vary diavolana , ka maka fanahy ny akoho . [Veyrières 1913 #3712, Rinara 1974 #2483, Cousins 1871 #1890, Rajemisa 1985]
Proverb 4466 Mitsanga-mitoetra tahaka ny akoho mantsina atody . [Rinara 1974 #2499]
Mivoaka sy midi-matetika tahaka ny akoho mantsina atody . [Rinara 1974 #2525]
Mivoaka sy midi-matetika , toy ny akoho mantsina atody . [Cousins 1871 #1923]
Mivoaka sy midi-matetika toy ny akoho mantsin' atody . [Houlder 1895 #1005]
Mivoaka sy miditra matetika toy ny akoho mantsina atody . [Veyrières 1913 #3044]
Proverb 4495 Mivadik’ isanisana karaha lohalitr’ akoho . [Samson 1965 #M121]
Proverb 4512 Mivoaka akoho . [Veyrières 1913 #6588]
Proverb 4534 Mody akoho . [Veyrières 1913 #6591]
Proverb 4615 Mpanjato vaky sahafa , ka manatavy ny akohon’ olona . [Veyrières 1913 #2394, Rinara 1974 #2597, Cousins 1871 #1967]
Randranobe vaky sahafa , ka manatavy ny akohon' olona . [Houlder 1895 #1967, Veyrières 1913 #1930]
Randranobe vaky sahafa , ka manatavy ny akohon' olona (ompin' ny olona ). [Rinara 1974 #3700]
Randranobe vaky sahafa : manatavy ny akohon’ olona . [Cousins 1871 #2739]
Proverb 4690 Na dia manarona akoho aza, raha mby amy ny omen’ Andriamanitra , dia manana. [Cousins 1871]
Na dia manarona akoho aza, raha mby amin' ny omen' Andriamanitra dia manana . [Houlder 1895 #29, Rinara 1974 #2652]
Na dia manarona akoho manatody aza hianao, raha omby amin' izay omen' Andriamanitra , dia manana . [Veyrières 1913 #37]
Proverb 4709 Nahoana ny akoho talen-trano ka atakalonao vaovao ? [Veyrières 1913 #1385]
Proverb 4715 Nahoana no dia akohovavy maneno ? [Veyrières 1913 #1777, Cousins 1871 #2031]
Proverb 4781 Namono akoho tsara ihany, ka namonoam-borombe vao torana! [Rinara 1974 #2736]
Proverb 4807 Natao hitsikitsika hivavahana , kanjo voromahery hipaoka ny akoho . [Houlder 1895]
Natao ho hitsikitsika hivavahana , kanjo hay papango nipaoka ny akohokely . [Rinara 1974 #2757]
Natao ho hitsikitsika hivavahana , kanjo voromahery nipaoka ny akoho . [Rajemisa 1985]
Natao kitsikitsika hivavahana , kanjo manjary voromahery nipaoka ny akohokely . [Cousins 1871 #2093]
Proverb 4814 Natao ihany ny handry tsy mirakotra fa nony maneno akoho mandray lamba . [Rinara 1974 #2762]
Natao ihany ny handry tsy mirakotra , fa nony maneno ny akoho mahatsiaro hatsiaka ka mandray lamba . [Veyrières 1913 #2315, Cousins 1871]
Proverb 4866 Ny akoho no ho lehibe , ny volony. [Veyrières 1913 #6017]
Proverb 4867 Ny akoho no maty dia tenieranan' ny mpivady . [Rinara 1974 #2840]
Proverb 4868 Ny akoho no mikakaka , asesiky ny atodiny ; ny zanak’ omby no mimama , manina an-dreniny . [Cousins 1871 #2134]
Proverb 4869 Ny akoho no tsy nanidina : tsy nahandry ny andro zoma . [Rinara 1974 #2841]
Proverb 4870 Ny akoho novonoina no mody latsa , ary ny atao no manebaka . [Rinara 1974 #2842]
Ny akoho novonoina no mody latsa , ary ny atao no tonga adidy . [Houlder 1895 #145, Veyrières 1913 #6481]
Proverb 5069 Ny fanompoana hoatry ny tsangan' akoho , ka izay be fitranga ihany no voa . [Veyrières 1913 #384]
Ny fanompoana ohatra ny tsangan’ akoho , ka izay be fitranga ihany no voa . [Cousins 1871]
Ny fanompoana toy ny tsangan' akoho , ka izay be fitranga ihany no voa . [Rinara 1974 #191]
Proverb 5210 Ny kary indray no tsy tia ny akoho . [Cousins 1871 #2276]
Proverb 5682 Ny vary raraka sakaizan' akoho . [Veyrières 1913 #2399, Rinara 1974 #3359, Cousins 1871 #2469]
Ny vary raraka sakaizan' ny akoho . [Houlder 1895 #774]
Proverb 5694 Ny Vazimba no mankarary , ka ny akoho no mihanton-doha . [Houlder 1895 #59]
Ny Vazimba no mankarary , ny akoho no mihanton-doha . [Veyrières 1913 #99]
Proverb 5695 Ny Vazimba no voahitsaka , ka ny akoho no voa-tapa-doha . [Veyrières 1913 #100, Cousins 1871 #2474]
Proverb 5735 Ny vorona ve no tsy azom-pandrika ka ny akoho no aripaka . [Rinara 1974 #3373]
Proverb 5781 Ohatra ny akoho nafofoka : maty fa tsy nahaleo ny marary . [Rinara 1974]
Proverb 5796 Olona iray no nangalatra akoho tao Alasora , ka ny terak' Alasora rehetra no natao hoe mpangalatra akoho . [Rajemisa 1966]
Proverb 5943 Piri-maso nangalaran' akoho : tompony 'ndraika irasana . [Samson 1965 #P8]
Proverb 6002 Raha akoho no horasaina aza ny famaky no hetsiketsehana . [Rinara 1974 #3546]
Raha akoho no horasaina , aza ny famaky no hotadiavina . [Houlder 1895 #852]
Proverb 6013 Raha avy ny loza ny patsa iray tsy omby vava . [Rinara 1974 #3556]
Proverb 6135 Raha papango no maty , mifaliahavanja ny akoho , fa raha olo-manga no lasa , very kiady ny madinika (na manganohano ny madinika ). [Rinara 1974 #236]
Proverb 6148 Raha sery ho sitran’ ny anamalaho ihany, ka aleo mitady vantotr’ akoho ho sahirana ? [Cousins 1871]
Proverb 6174 Raha tsy hety ny atao , ny tain’ akoho aza maha-tafintohina , ny patsa iray tsy omby vava ; ary raha hety kosa ny atao , ny saobakaka aza mampidi-dranon-ketsa , ny hazo tandrano mody andevolahy . [Veyrières 1913 #2239, Cousins 1871 #2719]
Raha tsy mety ny atao , tain' akoho aza manatintohina , ny patsa iray tsy omby vava , ary raha mety kosa ny atao , ny saobakaka aza mampidin-dranon-ketsa . [Rinara 1974]
Proverb 6317 Rebarebany ihany sahala amin' ny akoholahy fahavaratra . [Rinara 1974 #3741]
Proverb 6319 Rehefa indrindra natao ho kary ihany aho, dia hihinana akoho . [Veyrières 1913 #4317, Cousins 1871]
Proverb 6322 Rembin’ akoho , tsy mitondra mody . [Samson 1965 #R46]
Proverb 6325 Reniakoho fatora-mahazaka , ka mitondra ny tsy eran’ ny aina . [Veyrières 1913 #857, Rinara 1974 #3744, Cousins 1871 #2781]
Proverb 6326 Reniakoho lasan-tsintsina , ka hagagana no hita. [Veyrières 1913 #5776]
Reniakoho nopaohin-tsintsina : ny hatezerana tsy misy, fa fahagagana no sisa. [Veyrières 1913 #5777, Cousins 1871 #2782]
Reniakoho nopaohin-tsintsina : ny hatezerana tsy misy fa ny hagagana no sisa . [Rinara 1974 #3745]
Reniakoho nopaohin-tsintsina : ny hatezerana tsy nisy, fa fahagagana no hita. [Houlder 1895 #976]
Proverb 6327 Reniakoho nosingora-mahazaka : am-paingo no anjara , ka mahazaka no anjara . [Rinara 1974 #3746]
Proverb 6335 Reraka ny kary , fa lasan- -ko papango ny akoho . [Veyrières 1913 #734, Rinara 1974 #3755, Cousins 1871 #2792]
Proverb 6405 Sahala amin' ny Vazimban' Inenifara , ka tsy mba mila menaka , na vantotr' akoho , fa fihavanam- potsiny kosa. [Veyrières 1913 #107]
Vazimban' Inenifara : tsy mandany menaka , tsy hitondrana vantotr' akoho . [Rinara 1974]
Vazimban' Inenifara : tsy mila akoho , tsy mila menaka , fa fihavanam- potsiny ihany. [Veyrières 1913 #107, Cousins 1871]
Proverb 6425 Sakafon' akoho . [Veyrières 1913 #4586]
Proverb 6426 Sakafon' akoho ka vitan-tsindroka ihany. [Rajemisa 1985]
Proverb 6450 Sakan' akoho lasan-tsintsina , ka sady taitra no talanjona . [Houlder 1895 #2212, Veyrières 1913 #5778]
Proverb 6541 Sasa-poana ohatra ny akoho mikotri-borona , valaky ny tsy ho an' ny tena . [Abinal 1888]
Proverb 6823 Tanantanana am-piringa : isampazan' ny akoho manaraina . [Veyrières 1913 #3142]
Proverb 6978 Te-hoderain’ ny akoho , ka mitoto vary hariva. [Veyrières 1913 #2113, Cousins 1871 #3061]
Proverb 6989 Tendan' akoho latsaka orana . [Rajemisa 1985]
Proverb 6994 Tenenina , toa halozana ; avela , manombika akoho . [Houlder 1895 #1001]
Tenenin-dava , toa hala : avela, manombika akoho . [Veyrières 1913 #1537, Cousins 1871 #3073]
Proverb 7059 Tintely am-pahitr’ akoho : ny tranony ratsy fa ny haminy tsisy hafa. [Samson 1965 #T76]
Proverb 7084 Tohatr' akoho : ny vavany no amantarana azy. [Rinara 1974 #4148, Cousins 1871 #3105]
Proverb 7101 Toy ny akoho kely misotro rano : Andriamanitra no andrandrainy . [Veyrières 1913 #56]
Toy ny akohokely misotro rano, ka ny Andriamanitra no andrandrainy . [Houlder 1895 #27]
Toy ny akohokely misotro rano : ny Andriamanitra no andrandrainy . [Cousins 1871 #3174]
Toy ny akoho misotro rano , ka izay kely azo andrandraina . [Veyrières 1913 #860, Cousins 1871 #3172]
Toy ny akoho misotro rano : na kely na be azo iandrandrana an' Andriamanitra . [Rinara 1974 #4251]
Proverb 7239 Tomany ila reny toa akoho kely. [Veyrières 1913 #1004, Cousins 1871 #3117]
Proverb 7275 Tongotr' akoho tapaka , izay tsy azony manambatra . [Rinara 1974 #4195, Cousins 1871 #3131]
Proverb 7297 Torimason' akoho . [Veyrières 1913 #6786]
Proverb 7298 Torimason' akoho , ka vita an' anjona ihany. [Rinara 1974 #274]
Proverb 7309 Toto vary diavolana : miala safoitra amin’ akoho . [Samson 1965 #T110]
Proverb 7310 Toto-vary hariva, ka manari-dia ny akoho . [Houlder 1895 #1277]
Toto vary hariva : manary dia ny akoho . [Cousins 1871 #3152]
Proverb 7359 Tranom-barin’ akoho : marivo fanaterana . [Samson 1965 #T121]
Proverb 7385 Tsaporetr’ akoho : tsy firenam-papango . [Samson 1965 #T139]
Proverb 7462 Tsy hadalan' akoho no itoerany any an-joro, fa toeram-boazara . [Veyrières 1913 #866]
Tsy hadalan' ny akoho no itoerany an-joro fa toeram-boazara . [Rajemisa 1985]
Tsy hadalan' ny akoho no itoerany eo an-joro, fa toeram-boazara . [Rinara 1974 #4491, Cousins 1871 #3346, Rajemisa 1985]
Proverb 7526 Tsy mahalala izay varavaran-kodiavina , hoatry ny akoho amidy ao an-tsena. [Veyrières 1913 #2047]
Proverb 7591 Tsy mba ny akoho foy ririnina , ka hireraka elatra , fa ny zana- borona foy lohataona ka mavitrika . [Rinara 1974 #292]
Tsy mba ny akohokely foy ririnina izahay ka hanjoretra sy hireraka elatra ; fa ny zana-borona foy lohataona , ka sady matanjaka no mavitrika . [Cousins 1871 #3390, Nicol 1935]
Proverb 7623 Tsy mety raha akoho iray no hovonoina , ka famaky no zahana. [Rinara 1974 #4580]
Proverb 7624 Tsy mety raha akoho no rasaina , ka famaky no tadiavina . [Cousins 1871]
Proverb 7749 Tsy misy mahay mandeha ohatra ny akoho , fa raha mandeha an--tsahafa solafaka . [Rinara 1974]
Tsy misy mahay mandeha tahaka ny akoho fa raha mandeha an--tsahafa solafaka . [Rajemisa 1985]
Tsy misy mahay mandeha toy ny akoho ; fa raha mandeha amy ny sahafa , solafaka . [Cousins 1871]
Tsy misy mahay mandeha toy ny akoho ; fa raha mandeha amin’ ny sahafa , solafaka . [Nicol 1935 #288]
Proverb 7768 Tsy misy na inona na inona ohatra ny totohondrin' Ikotomanana , raha vao mivonkina toa hahafaty omby , fa nony mamely , tsy mahafaty akohokely . [Rinara 1974]
Tsy misy na inona na inona, ohatra ny totohondrin’ Ikotomanana : raha vao mivonkina , toa hahafaty omby ; nefa nony mamely , tsy mahafaty akohokely akory. [Cousins 1871]
Proverb 7769 Tsy misy nanao soa ohatra ny fandrahoam-bary ; fa raha vaky, nanotrehana akoho . [Cousins 1871]
Tsy misy nanao soa toy ny fandrahoam-bary , fa nony vaky nanotrehana akoho . [Rinara 1974 #4739]
Tsy nisy nanao soa ohatra ny vilany , fa raha vaky, natao fanotrehana akoho . [Houlder 1895]
Proverb 7787 Tsy misy zazakely vao miana-mandeha , ka hotoroana ny lalan-kaleha ; tsy misy akohokely jamba ka hotohinina vao mianavaratra , tsipazam-bary vao mivoaka . [Veyrières 1913 #6134]
Proverb 8036 Vantotr' akoho nofaohin-tsintsina , ka sady gaga no talanjona . [Rinara 1974 #4855]
Vantotr’ akoho nofaohin-tsintsina : saiky tezitra , kanjo talanjona . [Cousins 1871 #3610]
Proverb 8052 Varifitoventy mahatapaka ny vozon' akoho . [Rajemisa 1985]
Proverb 8305 Volom-bodin' akoho folaka : ny vava no manitsy . [Veyrières 1913 #4849, Cousins 1871 #3728]
Volom-bodin' akoholahy folaka , ka ny vava no enti-manitsy azy. [Rinara 1974 #5020]
Proverb 8306 Volom-bodin’ akoholahy : izay ihoronan’ ny inaro mba hihoronana . [Cousins 1871 #3729]
Volom-bodin' akoholahy : izay ihoronan' ny maro mba ihoronana . [Veyrières 1913 #2266]
Volom-bodin' akoholahy , ka izay ihoronan' ny maro mba hihoronany . [Rinara 1974 #5021]
Proverb 8383 Zana- borona foy lohataona , akohokely foy ririnina : samy fananana ka tsy azo hiangarana . [Rinara 1974 #5078]